Lobb Miner | ThatsLuck.com
Diiwaan nambarada roulette-ka ee khadka tooska ah
Lobb Miner waa barnaamij cusub oo roulette ah oo kuu ogolaanaya inaad si otomaatig ah u duubeyso nambarada roulette-ka ee internetka maalmo.
Inaad haysato qalab noocan oo kale ah oo aad hayso ayaa runtii ah aad muhiim u ah, sababtoo ah waxay u ogolaaneysaa ciyaaryahanka inuu falanqeeyo tirakoobka ama dejiyo istiraatiijiyado ciyaarta illaa iyo hadda aan macquul aheyn in la faahfaahiyo.
Maaha wax kadis ah in bilihii ugu dambeeyay adeegyo badan oo khadka tooska ah ay dhashaan kuwaas oo bixiya rukhsad bille ah si loogu oggolaado ciyaaryahanka inuu helo digniino ku saleysan Laanta kormeerka ee casino online ah, taasi waa bogga internetka ee casino oo muujinaya lambarradii ugu dambeeyay ee lagu sii daayay miisaska kala duwan ee roulette.
Sidee Lobby Miner u shaqeeyaa
Lobb Miner waa wax aad u fudud in la isticmaalo, kaliya bilow ka dib markaad soo gasho lambarka shaqeynta, waxaad ku shubtaa bogga casino kaas oo softwareku tilmaamayo adigoo riixaya badhanka Lobb Load.
Feejignaan: Bogga la rakibey waa midka bixiye Talyaani ah, sidaa darteed dhammaan ciyaartoy Talyaani ah dhib kuma lahan doono adeegsiga Lobb Miner, kuwa ku nool wadamada kale, waxaa macquul ah inaysan macquul aheyn in la raro bogga sidaas darteed software ma shaqeyn doono.
Kumaa suuragal ah inuu xiiseynayo Lobb Miner waa inuu isku dayaa premium si aad ugu iibsato buugga gacanta ee 'Amazon', maxaa yeelay suurtagal iima noqonayso inaan farageliyo si aan si sax ah u beddelo koodhka maxaa yeelay sidoo kale kuma xirmi karo goobaha ciyaaraha ee shisheeyaha.
Haddii aadan deganeyn Talyaaniga oo aadan awoodin inaad aragto bogga buuxiya Lobby Miner, isticmaal a VPN waxay noqon kartaa fikrad wanaagsan, laakiin dhibaatadan, ciyaartoygu waa inuu ku kacaa ficil si uu xalka ugu raadiyo.
Marka qolka casino lagu buuxiyo badhanka Lobb Load, riix badhanka labaad Bilow Macdanta iyo Lobby Miner ayaa bilaabi doona duubista dhammaan lambarrada miiska ee bogga ku yaal.
Haatan waxaa ku yaal miisaska 20 miisaska, dhammaantoodna ka socda barxadda caanka ah Playtech, laakiin laba ka mid ah oo aan soo bandhigin isku xigxiga nambarada lagu sii daayay hoolka, sidaas darteed diiwaangelintu hal mar ayey u dhici doontaa 18 miis.
Dhammaan xogta ku qoran 18-kan miis waxaa lagu duubi doonaa sida ugu badan feylasha qoraalka, oo ku jira galka soo saarka barnaamijka.
Waxa kale oo aad riixi kartaa badhanka si aad uhesho galka Kaydka Xogta, iyo sidoo kale in la nadiifiyo waxa ku jira dhammaan faylasha kaliya riix badhanka Dib u deji feylasha.
Adeegso xogta ay soo ururisay Lobby Miner
Codsiyada waa kuwo aan dhammaad lahayn, kaliya waxay u maleynayaan in qaar ka mid ah barnaamijyada xiisaha leh in la heli karo in muddo ah ThatsLuck waxay u isticmaalaan faylasha qoraalka falanqaynta tirakoobka, sida:
►Roulette Super Stats kaas oo aad ku falanqeyn karto mowjadaha, dib u dhaca iyo ku celcelinta tirooyinka ama fursadaha kala duwan waqtiga dhow;
►Roulette Bias Sniper kaas oo aad ku hubin karto 18 miis haddii eex ay dhacdo adigoon u baahnayn inaad ku qorto lambarada miiska furan iyo waliba midba mar;
►Roulette Trends Hunter kaas oo aad ku dhexgalin karto isbeddellada fursadaha (ama qaybaha) si aad uga faa'iideysato sii socoshadooda.
Qalab kale ayaa la daabici doonaa waqti yar si looga faa'iidaysto Lobb Miner, taasi waa softiweer cusub oo iyagoo ku xiraya feylasha qoraalka kala duwan ee ay duubtay Lobby Miner, ay awoodi doonaan inay ka digaan waqtiga dhabta ah ciyaaryahanka marka loo eego istiraatiijiyadda uu doonayo inuu dalbado.
Sida Lobby Miner diiwaangeliso
Macluumaad ahaan kama dambeys ah waxaan u maleynayaa inay waxtar leedahay in lagu soo wargeliyo in diiwaangelintu ay sidan u dhacayaan: miis walba tirada ka baxda taxanaha 5 lambar ee laga arki karo hoolka ayaa lagu daray feylka qoraalka.
Marka haddii tusaale ahaan miis aad ku aragto in lambarrada 1-2-3-4-5 ay soo baxeen, isla marka lambar cusub uu soo baxo taxanaha fiidiyowgu wuxuu noqonayaa 23-1-2-3-4 iyo sidaa darteed lambarka 5 ayaa lagu dari doonaa feylka qoraalka miiskaas. Tani waxay ficil ahaan ka dhigan tahay in sahamintu ay dhici doonto iyadoo dib u dhac celcelis ah oo ah 4 ama 5 lambarro ah marka la barbar dhigo godadka lagu arko bogga internetka.
Ugu dambayntii laakiin uguyaraan, waxaan idinla socodsiinayaa in softiweerkani uu joojin karo shaqadiisa maanta si kasta oo ay tahayna ma jiri doonaan casriyeyn bilaash ah, maxaa yeelay haddii tusaale ahaan adeeg bixiyuhu uu go'aansado inuu wax ka beddelo bogga si uusan u muujin lambarrada, ama uu wax uga beddelo java lambarka bogga si looga hortago diiwaangelinta lambarrada, waxaa laga yaabaa inaan awoodi kari waayo inaan mar kale software-ka ka shaqeeyo.
Markaa ka fikir sida suurtagalka ah inaad lumisay maalgashigii yaraa ee aad aakhirka u samayn lahayd iibsashada buuggan ama barnaamijyada kale ee lagu soo dari karo Lobby Miner. Taasi waa taas.
Ku raaxeyso oo ha ilaawin inaad iska qorto kanaalka Telegram haddii aad rabto inaad ku eegto dhammaan wararka ku saabsan daabacadaha soo socda.
Soo Degso Fayl	LMiner.zip - 72 MB